Sister's Ice Cream - Imewe Mmewe
Ice Cream Edebere ngwakọ a maka ụlọ ọrụ Sisters Ice cream. Ndị otu ahụ nwara iji ụmụ nwanyị atọ, bụ ndị echetara ndị na-emepụta ngwaahịa a, n'ụdị agba ndị nwere obi ụtọ na-abịa site na uto nke ice cream ọ bụla. N'ime ụtọ ọ bụla nke imewe ahụ, a na-eji pf ice cream eme ihe dị ka ntutu isi nke ndị mmadụ, nke na-egosi ọmarịcha ihe oyiyi dị ọhụrụ na ngwugwu ice cream. Ihe okike a, n’ụdị ọhụụ ya, adọtala ọtụtụ nlebara anya n’etiti ndị na-asọmpi ya ma nwee ahịa dị elu. Nhazi ahụ na-anwa imepụta nkwakọ ngwaahịa mbụ na nke okike.
Aha oru ngo : Sister's , Aha ndị na-emepụta ya : Azadeh Gholizadeh, Aha onye ahịa : Azadeh Gholizadeh.